Kulankii galabta dhexmari lahaa Kooxaha Elman iyo Horseed ee General Daa’uud oo baaqday… (Maxay tahay sababtu?) – Gool FM
Kulankii galabta dhexmari lahaa Kooxaha Elman iyo Horseed ee General Daa’uud oo baaqday… (Maxay tahay sababtu?)
Haaruun October 24, 2019
(Muqdisho) 24 Okt 2019. Kulan xiiso badan ayaa galabta ka dhici lahaa garoonka Eng Yariisoow Stadium ee dhaca Degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir, ciyaartaasoo qeyb ka ahayd tartanka General Daa’uud.
Ciyaartan ayaa dhaxmari lahayd Kooxaha Horseed iyo Elman, waana kulankii koowaad ee ay labadaan kooxood ka dheelan Koobka General Daa’uud kal ciyaareedkan.
Kulan ciyaareedkan ayaa la sheegay inuu u baaqday sababo la xiriira in caawa lagu wado in garoonkan lagu dheelo final-ka Koobka Degmooyinka Gobolka Banaadir xilli ay ku hardamayaan Degmooyinka kala ah Dharkenleey iyo Waaberi isugu soo haray kama dambeysta tartankan.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegaynaa qaar ka mid ah xaqiiqooyinka loo daawan lahaa kulanka baaqday galabta ee Horseed iyo Elman:-
>- Naadiga lagu naaneyso Jaallayasha ee Elman ayay ugu dambeysay inay ku guuleysato koobka General Daa’uud sanadkii 2017-kii, xilligaasoo uu macallin u ahaa kooxdan Tababare Cabdijoon, waxaana ay doonayaan inay sanadkan gacanta ku dhigaan koobka.
>- Kooxda Horseed oo ah kooxda koobkan loo dhigo, maadaama ay tahay kooxda matasha ciidanka xoogga dalka waxaa iyana ugu dambeysay hanashadiisa sanadkii 2015-kii.
>- Kulankii ugu dambeeyay ay labadan kooxood dhexmara waxaa 2-1 ku adkaatay kooxda Elman ciyaar qeyb ka ahayd horyaalka Somali Premier League.
Kabtanka Barcelona ee Lionel Messi oo xalay rikoor cusub ka sameeyey Champions League
Kooxda Manchester United oo bedelka Luke Shaw ka dhex aragta horyaalka Premier League